Af-Soomaali - Reko Assistans
NAALO SOO XARIIR. Huda Farah: 0734-475175
Reko Assistans AB waa kambaani dadka caawiya. Waxaan nahay koox aqoon oo kazoo kala jeeda wadamo kala duwan, oo ku hadla lix luqadood. Qofki raba in lacaawiya, waxaan xaqiijnaynaa in aan u helayno wuxuu haq u leeyaha. Waxaan hubnaa in aan u heli karno shaqooyin ama kaalmo nola shiisa kor usoo qaadi karta. Waxaa lamooda in ay adagtahay in la qorto koox ku caawin karta ama aad ku wareegto kucusub. Lakin afar tilaabo haddii la qaado waa yeeli karaa.
Waxaan keena shaqooyin wanaagsan oo leh caymis, banshan, iyo cafimaad.
Tabar bilaash ah (First aid or CPR).
Waxaan kaa caawinay naa qorida xarjiyada, qaymanta iyo haddii loo baahdo dacwooyinka maxkamadaha
Helida goryaqaano khabiir ku ah waxa dacwaaddu ku saabsan tahay.
Tusaale iyo kaalmo ku saabsan arimo kaloo badan. Sida kaalmada curyaanada xaquuqda daryeelaha, sida loo helo guryaha iyo gaadiidka.
Iyo in ka baadan!
Waxa aad heli kartaa gunnada kaalmaynta haddii aad qabto naafo weyn oo joogto ah oo aad u baahantahay kaalmayn shakhsi ah si aad uga dabaalato nolol-maalmeedka. Si aad gunno uga hesho Qasnadda caymiska [Försäkringskassan] waa in aad u baahnaato in lagaa caawiyo baahiyahaaga aasaasiga ah ugu yaraan 20 saacadood wiigiiba. Haddii wakhti intaas ka yari kugu filanyahya waxad la xidhiidhaysaa degmada si aad caawimo u hesho.
Qofkee heli kara gunnada kaalmaynta
Haddii aad u baahantay caawimo ka badan 20 saacadood wiigiiba oo quseeysa baahida aasaasiga ah sida maryo dhaqidda, maryo-xidhasho, cunto cunidda, la xidhiidhka dadka kale iyo ka dhaqaaqidda meesha aad joogto, waxa aad heli kartaa gunnada kaalmaynta. Waa se in aad ka tirsanaato kooxahan soo socda mid ka mid ah:
Dadka korriinkoodu kala dhimanyahay, kuwa qaba autism-ka ama xaaladaha autism-ka shabbaha.
Dadka qaba naafanimo weyn oo joogto ah oo xagga garaadka ah oo wayni ku haleelashay ka dib markii dhaawac maskaxeed ka soo gaadhay nabar ama xanuun jidheed.
Dadka qaba naafo jidheed ama maskaxeed oo joogto ah oo aan ku xidhnayn gaboow caadi ah. Naafanimadu waa in ay ahaato mid weyn oo nolol-maalmeedkaaga u sababaysa dhibaato weyn.
Ma heli kartid gunnada kaalmaynta haddii aad degentahay guri-kooxeed ama lagugu daweynayo xarun. Haddiise ay jiraan asbaabo khaas ah, waad heli kartaa gunnada kaalmaynta marka wakhti kooban lagugu daweynayo isbitaalka ama aad ka qaybqaadanayso xannaada carruurta, iskuulka ama hawlmaalmeed kale.
Waa maxay kaalmaynta shakhsiga ahi?
Kaalmaynta shakhsiga ah waxa loola jeeda taageero u qaabaysan qaab shakhsi ah oo xaalado kala duwan ay bixiyaan dad koobani. Kaalmaynta shakhsiga ah ee baahida aasaasiga ah macneheedu waa in lagaa caawiyo maryo dhaqidda, maryo-xidhasho, cunto cunid, la xidhiidhka dadka kale iyo ka dhaqaaqidda meesha aad joogto ama caawimo kale oo u baahan in aqoon dheer loo yeesho naafadaada.
Xaq ayaad u yeelan kartaa kaalmayn shakhsi ah xiitaa baahiyo kale dartood
Personal assistance means personally designed assistance provided in different situationHaddii aad u baahantahay caawimada baahiyaha aasaasiga ah in ka badan 20 saacadood wiiggiiba, waxa kale oo aad xiitaa xaq u yeelan kartaa kaalmayn shakhsi ah oo quseeysa nololmaalmeedkaaga. Waxa ay tusaale ahaan noqon kartaa in lagaa caawiyo cunto karin, soo adeegga, in aad samayso hawlqabadka wakhtiga firaaqada ama in aad shaqayso.s by a limited number of people. Personal assistance for basic needs means assistance in washing and dressing, eating, communicating with others and moving about, or other assistance that requires detailed knowledge of your disability.
Adigaa go´aanka leh
Go’aanka hab-dhiska adeegga adiga ayaa iska leh. Waxaad:
1. laf-ahaantaada noqon kartaa loo shaqeeyeha oona qoran kartaa hal ama dhowr kaaliyeyaal. Laakinse waa inaad wargelisa Kormeeraha daryeelka iyo xannaanadda Inspektionen för vård och omsorg.
2. xilka saari kartaa shirkad ama urur oo ruqsadda dhaqdhaqaaqa kaaliyaha-shaqsiyeed ka haysto Socialstyrelsen ama Kormeeraha daryeelka iyo xannaanadda.
3. xilka saari kartaa dowladda hoose.
Ma jiro wax ka horistaagayo in aad noqoto loo shaqeeyeha, adigoo isla markaas caawimaad adeegga ka qaato Dowladda hoose ama Qabanqaabiye kale.
Dalbashada iyo go´aanka
Marka uu codsigaagu yimaaddo waxa aad ka wada hadlaysaan baahidaada caawimo Qasnadda caymiska. Markaa ka dib ayey Qasnadda caymisku, go´aaminaysaa inta saacadood ee aad helayso gunnada.
Sidoo kale degmadu waxa ay wargelin kartaa Qasnadda caymiska haddii aad u baahantahay gunnada kaalmaynta. Markaa uma baahnid in aad wax dalab ah samayso, ee waxa kula soo xidhiidhaysa Qasnadda caymiska si ay kaala munaaqashoodaan caawimada aad u baahantahay.
Haddii aanad ku qanacsanayn go´aanka
Haddii aad u aragto in go´aanku qaldanyahay, dib ayey u eegi kartaa Qasnadda caymisku. Markaa waa in aad qoraal u soo dirto Qasnadda caymiska oo aad dalbato dib u eegid. Warbixin ku saabsan sida aad yeelayso waxa ay ku qorantahay warqadda go´aanka. Haddii Qasnadda caymisku ay go´aankii hore waxba ka bedeli waydo, waxa aad uga dacwoon kartaa maxkamadda gobolka [länsrätten]. Warbixin ku saabsan sida aad uga dacwoonayso waxa ay ku qorantahay go´aankii dib u eegidda.
Soo sheeg wixii isbedello ah!
Gunnada kaalmaynta waxa dib loo eegayaa labadii sanaba mar ilaa aad buuxinayso 65 jir laakiin haddii xaaladdaadu isu bedesho si weyn waxa gunnada dib loo eegayaa intaa ka hor. Sidaas darteed waa muhiim in aad soo sheegto isbedel kasta oo saamayn kara xaq u lahaanshahaaga gunnada kaalmaynta. Haddii aad hesho lacag badan oo dheeraad ah, waxa aad ku qasbanaan kartaa in aad soo celiso.
Macluumaadka waaxa la ga kenay [Försäkringskassan]